Discs izay azonao henoina amin'ity Oktobra ity | Bezzia
Rakitra azonao henoina amin'ity Oktobra ity
Maria vazquez | 07/10/2021 12:00 | ankehitriny
Amin'ity volana ity dia anananao ny fotoana voalohany handrenesana ireo rakikira vaovao misy mpanakanto vitsivitsy. Any Bezzia dia tsy afaka tononina daholo izy ireo, noho izany dia nanao mpanakanto na vondrona 6 voafantina kely izahay namoaka na hamoaka rakikira vaovao amin'ity volana ity. Iza amin'ireo no tianao ho re?
1 Atsimo amin'ny lohasaha - Quique González
2 Hisy dikany daholo izany amin'ny farany - James Arthur
3 Fito ambin'ny folo mandeha any ambany - Sam Fender
4 Ny renirano sy ny vato - Morgan
5 Ady an'arivony - Malú
6 Birao manga - Lana del Rey
Atsimo amin'ny lohasaha - Quique González
Ny 1 Oktobra XNUMX Oktobra dia nahita ny hazavan'ny rakipeo vaovao an'i Quique Gonzalez: Sur en el valle. Fanangonana ny Làlan-kaleha 12 misy toetra voajanahary misy, izay nandrakitra voahodidina mozika mahazatra toa an'i Toni Brunet (mpamokatra sy gitara), Jacob Reguilón (bas), Eduardo Olmedo (amponga) ary Alejandro Climent (piano).
Natao sonia indray ireo taratasy Quique González Ankoatra an'i "Tsy marina izany" nataon'i Kirmen Uribe. Navoakan'ny marika Cultura Rock Records, misy ny fizarazaran'ireo mpikambana ao amin'ny Morgan: David Schulthess "Chuches" (Hammond sy Wurlitzer) ary Carolina de Juan (feo miorina). Avy amin'ny rakitsary dia efa afaka nihaino an'i Can que me muera sy Jade aho, izay ny video azonao jerena eto ambany.
Hisy dikany daholo izany amin'ny farany - James Arthur
Mila miandry fotsiny ianao rahampitso handrenesana Hisy dikany daholo izany amin'ny farany, rakikira fahefatra nataon'i James Arthur. Fampiangonana làlana 14 miaraka amin'ny Ny fanafody ho mpitovo tokana, izay nahafahantsika nandre ny septambra, Avalanche ary Emily.
Niforona tao an-trano ilay rakikira, miaraka amin'ny olona vitsy kokoa, izay namela azy ho marefo kokoa noho ny hatramin'izay. Rehefa avy nivarotra firaketana maherin'ny 30 tapitrisa amin'ireo tetik'asa nataonao teo aloha, hisarika ny vahoaka indray ve ity tetikasa ity?
Fito ambin'ny folo mandeha any ambany - Sam Fender
Fito ambin'ny folo mandeha any ambany no Rakitra faharoa an'i Sam Fender. Navoakan'i Polydor Records, ny rakikira dia noraketina tao North Shields ary novokarin'i Bramwell Bronte, toy ny fisehony voalohany, balafomanga Hypersonic (2019). Io dia ho iray amin'ireo rakikira izay havoaka rahampitso, na dia efa azonao vidina amin'ny sehatra rehetra aza izany.
Momba ity rakikira vaovao Sam Fender ity dia nilaza hoe: «Tantaran'ny taona io. Momba ny fahanterana. Fankalazana ny fiainana aorian'ny fitsapana, ary fankalazana ny fahavelomana. Ilay làlana manome ny anarany rakikira dia nanjary toy ny topi-maso voalohany. Avy eo tonga Aye ary nampidina anao.
Ny renirano sy ny vato - Morgan
Tamin'ny 15 Oktobra, ny renirano sy ny vato, ny Rakitra studio fahatelo an'i Morgan, fanangonana hira 10 izay nanombohan'izy ireo niasa taorian'ny nitazomana an'i Covid-19, miaraka amin'ny filozofia mitovy amin'ny mahazatra ihany: "makà hevitra vitsivitsy ary miaraha mandinika miaraka amin'izy ireo manandrana mijery ny tontolo iainana, ny hevitra ary ny feo kely kokoa."
Taorian'ny asa efa ho herintaona, tamin'ny fiandohan'ny taona 2021, nandrakitra ireo hira tao amin'ny Le manoir de Léon studio any Frantsa. Miaraka amin'ny famokarana nataon'i Campi Campón, fifangaroan'i Stuart White any Los Angeles, ary i Colin Leonard any Atlanta no nifehezana azy, natolotra an'i Alone ho toy ny fandrosoana voalohany ny rakikira, narahin'i River.
Ady an'arivony - Malú
Iray amin'ireo rakikira izay ho afaka henoinao amin'ity volana oktobra ity koa i Mil Batallas, ilay rakikira studio faharoa ambin'ny folo niandrasan'i Malú. Ny 22 oktobra izao vao hamidy ity asa vaovao ity, izay anaovan'ny mpanakanto Espaniôla azy niara-niasa tamin'ny mpamokatra Pablo Cebrián. "Ny hira tsirairay dia ady, ny ady tsirairay isaky ny mahatsapa sy miaina ...", hoy ny fanamarihan'ilay mpanakanto momba ilay tetikasa.
Tsiambaratelo ho an'ny feo no topi-maso voalohany amin'ny rakikira ary avy eo tonga ilay làlana manome ny anarany ilay rakikira. Tafiditra ao anatin'ity asa ity ihany koa ny Weaving Wings ho toy ny làlan-kaleha, hira iray navoaka ny 29 aprily 2020 nandritra ny fanombohan'ny areti-mandringana Covid-19, izay nandinihany ny maha reny azy izay efa ho avy tamin'io fotoana io. Ho fanampin'izay, hanasongadina a vahiny manokana, Mario Domm avy amin'ny vondrona Meksikana Camila, izay hiaraka aminy aorian'ny Storm.
Birao manga - Lana del Rey
Birmanà manga no Ny rakikira faharoa nataon'i Lana Del Rey tamin'ity 2021 ity trass Chemtrails amin'ny klioban'ny firenena. Tamin'ny 20 Mey 2021, nisy lalan-telo navoaka ho topi-maso an'ity asa vaovao ity: Birao manga, boky an-tsoratra ary ala mando Wildflower. Ny roa voalohany noforonin'i Gabriel Edward Simon, ny farany noforonin'i Lana Del Rey niaraka tamin'i Mike Dean izay mpamokatra ny hira ihany koa. Volana vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny 8 septambra Navotsotra i Arcadia.
Nifanindry tamin'ny premierean'ny Arcadia, naneho hevitra ilay mpanakanto: «Mihevitra aho fa afaka milaza ianao fa momba ity rakikira ity momba ny fiainako, ny zava-nitranga ary ny toetrako ankehitriny. Raha liana ianao dia miverena mihaino ireo hira telo voalohany navoakako. Notantarain'izy ireo ny niandohana. Ity hira ity dia mitendry eo anelanelany ary rehefa nidina ny firaketana dia ho henonao ny misy antsika ankehitriny. Na dia niezaka aza ny fitsikerana mitohy, nanosika ahy farafaharatsiny mba hijery ny tantaram-pianakavianay, handalina lalindalina kokoa, ary hanaporofo hatrany fa tsy miraharaha afa-tsy ny fomba itondrako an'izao tontolo izao Andriamanitra. Ary na eo aza ny fisalasalana momba ny fisehoan'ny fahalemena sy ny fanazavana tsy mitombina amin'ny tsy fanehoana andraikitra amin'ny ankapobeny, tokony holazaiko fa nahafinaritra ahy ny nifindra erak'izao tontolo izao, amin'ny maha-vehivavy manana fahasoavana sy fahamendrehana. Misaotra ireo namako nandritra izay 18 taona lasa izay izay ohatra mahasarika fa tsy fampisondrotana. Tsy mba nahatsapa mihitsy aho hoe tokony hampiroborobo ny tenako na hitantara ny tantarako, fa raha mahaliana anao dia milaza an'io ity rakikira ity ary tsy misy zavatra hafa azo atao. "
Aza adino, ireo rakikira rehetra ireo dia azonao henoina alohan'ny faran'ny volana oktobra. Iza amin'ireo no hanombohanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Rakitra azonao henoina amin'ity Oktobra ity
Inona avy ireo akanjo hametraka ny fironana amin'ity fararano ity ary mbola tsy fantatrao?
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny akanjo lava taloha